Tahafo i Jesosy dia ho Afa-po Amin’​ny Fiainana Ianao!
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mizo Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Tzotzil Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
‘Mandehana hatrany toy izay nandehanan’i Jesosy.’—1 Jaona 2:6.
HITANTSIKA tao amin’ilay lahatsoratra teo aloha fa afa-po tamin’ny fiainany i Jesosy. Mila manahaka izay nataony sy mihaino ny toroheviny àry isika raha te ho afa-po amin’ny fiainana.
Izany no asain’i Jehovah hataontsika, araka ilay 1 Jaona 2:6. Ilay hoe mandeha toy izay nandehanan’i Jesosy, dia midika hoe manahaka azy sy mankatò izay nampianariny, eo amin’ny fiainana manontolo. Ho tian’Andriamanitra isika raha manao izany, sady ho afa-po amin’ny fiainana.
Nanome toro lalana maromaro i Jesosy rehefa nampianatra, mba hanampiana antsika handeha toy izay nandehanany. Tamin’ilay toriteniny malaza teo an-tendrombohitra no ahitantsika ny ankamaroan’izany toro lalana izany. Handinika ny sasany amin’izany isika.
TORO LALANA: “Sambatra ny mahatsapa fa mila an’Andriamanitra.”—Matio 5:3.
NAHOANA IZANY NO MAHASAMBATRA?
Nilaza i Jesosy eo fa efa faniriana ao anatin’ny olona mihitsy ilay hoe te hahalala momba an’Andriamanitra. Tiantsika ho fantatra, ohatra, hoe: Inona no antony namoronana antsika? Nahoana no be dia be hoatr’izao ny fijaliana? Mba miraharaha antsika ve Andriamanitra? Manana fanahy tsy mety maty ve ny olona? Mila fantarintsika ny valin’ireo raha te ho sambatra isika. Ny Tenin’Andriamanitra ihany no mamaly tsara an’ireo. Fantatr’i Jesosy izany ka hoy izy rehefa nivavaka tamin’ny Rainy: “Ny teninao no fahamarinana.” (Jaona 17:17) Afaka manampy antsika hahalala an’Andriamanitra sy ho sambatra tokoa ve anefa ny Tenin’Andriamanitra?
TANTARA TENA NISY:
Mpihira tao amin’ny tarika iray mpanao rock i Esa, ary afaka ny halaza izy. Mbola tsy nahatsiaro ho sambatra ihany anefa izy. Hoy izy: “Nahafinaritra ahy ny nihira tao amin’ilay tarika, nefa mbola nahatsapa ihany aho hoe tsy nisy dikany ny fiainako.” Nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah i Esa tatỳ aoriana. Hoy ihany izy: “Nototofako fanontaniana izy. Nitombina sady avy tao amin’ny Baiboly daholo anefa ny teniny, ka nanaiky hianatra Baiboly taminy aho.” Nanohina ny fony ny zavatra nianarany ka nanokana ny fiainany ho an’i Jehovah izy. Hoy izy: “Nanana olana foana aho taloha. Ny eo tsy afaka nefa efa tonga indray ny manaraka. Tena sambatra anefa aho izao.” *
TORO LALANA: “Sambatra ny miantra.” —Matio 5:7, Fandikan-teny Protestanta.
Ny hoe miantra dia mangoraka, izany hoe tsara fanahy sy miahy izay ilain’ny hafa sy ny fihetseham-pony. Niantra olona nila fanampiana i Jesosy. Nangoraka izy, ka izy no tonga dia nanao zavatra mba hanamaivanana ny fijalian’ny hafa. (Matio 14:14; 20:30-34) Ho sambatra isika raha manahaka azy ka miantra olona. (Asan’ny Apostoly 20:35) Ahoana no ampisehoantsika fa miantra olona isika? Rehefa misy olona mila fanampiana, dia asehontsika amin’ny teny sy atao fa tsara fanahy isika. Tena mahasambatra ve anefa izany?
Maria sy Carlos
Maty vady ny dadan’i Maria. Voan’ny diabeta koa izy ka efa taona vitsivitsy izay no tsy afa-nihetsika teo am-pandriana. Nentin’i Maria sy Carlos vadiny hipetraka any aminy izy, ary karakarain’izy ireo tsara izay rehetra ilainy. Imbetsaka izy mivady no tsy matory amin’ny alina, ary indraindray aza nila nitondra azy haingana tany amin’ny hopitaly rehefa nihetsika ny aretiny. Misy fotoana ry zareo reraka be, nefa mahatsiaro ho afa-po mieritreritra hoe mikarakara izay ilain’ ny dadany. Sambatra, araka ny nolazain’i Jesosy, ry zareo, satria miantra olona.
TORO LALANA: “Sambatra ny mpampihavana.”—Matio 5:9.
Midika ara-bakiteny hoe “mpitandro fihavanana” ny hoe “mpampihavana.” Nahoana no mahasambatra izany? Satria mahatonga antsika hifandray tsara amin’ny olona ifaneraserantsika izany. Tena tsara àry ny mampihatra ny Romanina 12:18 hoe: “Raha azo atao, ka mbola miankina aminareo koa, dia mihavàna amin’ny olona rehetra.” Anisan’ilay hoe “olona rehetra” ny havantsika sy ny olona tsy mitovy fivavahana amintsika. Ho sambatra tokoa ve isika raha mihavana amin’ny olona rehetra?
Saika tsy nahavita nitandro fihavanana intsony ny vehivavy iray atao hoe Nair, noho ny olana nihatra taminy nandritra ny taona maro. Ny nitandro fihavanana tao an-tokantranony no tena mafy taminy. Nilaozan’ny vadiny mantsy izy, 15 taona teo ho eo izay, ka izy irery no nitaiza ny zanany. Lasa mpifoka rongony koa ny zanany lahy iray. Matetika no nandrahona an’i Nair sy ny zanany vavy izy io, satria efa tsy tompon’ny tenany intsony. Niaiky i Nair fa ny zavatra nianarany tao amin’ny Baiboly no nahatonga azy hihavana amin’ny hafa foana, na nisy olana toy izany aza. Miezaka izy mba tsy hifamaly na hiady, fa ho tsara fanahy sy hahatakatra ny fihetseham-pon’ny hafa. (Efesianina 4:31, 32) Resy lahatra izy hoe noho izy miezaka mitandro fihavanana no mahatonga azy hifandray tsara amin’ny olona ao an-tranony sy amin’ny hafa.
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY MOMBA NY HOAVY
Ho sambatra sy ho afa-po amin’ny fiainana isika raha mankatò ny torohevitr’i Jesosy. Mila mahalala izay lazain’ny Baiboly momba ny hoavy koa anefa isika. Tsy hisy dikany mantsy ny fiainantsika raha izao ihany no fantatsika: Ho antitra dia harary ary avy eo ho faty. Mbola izany anefa aloha no iainantsika.
Soa ihany fa misy zavatra tsara be dia be omanin’i Jehovah ho an’izay miezaka “mandeha hatrany toy izay nandehanan’i Jesosy.” Mampanantena izy fa hisy tontolo vaovao eto an-tany. Hiaina eto mandrakizay izay tsy mivadika aminy ka ho salama tsara foana. Izany no nokasainy ho azy ireo. Hoy ny Apokalypsy 21:3, 4: “Eo amin’ny olombelona ny tranolain’Andriamanitra, ary izy hiara-mitoetra amin’izy ireo, ary ireo ho olony, ka Andriamanitra mihitsy no ho eo aminy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny mason’izy ireo, ka tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy intsony ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha.”
Tsy mora ny fiainan’i Maria, ilay voaresaka tany amin’ny lahatsoratra voalohany. Tsy andriny erỳ ny hahatanterahan’ireo teny ireo. Izany mantsy no “tena fiainana”, ary ny Fanjakan’Andriamanitra no hitondra amin’izay. (1 Timoty 6:19) Tianao ve ny hahalala bebe kokoa an’izany? Miresaha àry amin’ny Vavolombelon’i Jehovah any akaikinareo, na manorata any amin’ny mpampanonta an’ity gazety ity. *
^ feh. 8 Ao amin’ilay lahatsoratra hoe “Manova Olona ny Baiboly: Ratsy Toetra Be Mihitsy Aho Taloha” ny tantaran’i Esa.
^ feh. 18 Manazava foto-kevitra isan-karazany avy ao amin’ny Soratra Masina ny boky hoe Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Be dia be no efa nandray soa tamin’izy io.
Hizara Hizara Tahafo i Jesosy dia ho Afa-po Amin’ny Fiainana Ianao!